गाली बेईज्जतीले मनमा चोट, के छ मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा कानुनी उपचार ? -
June 10, 2019 June 10, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on गाली बेईज्जतीले मनमा चोट, के छ मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा कानुनी उपचार ?
गाली बेईज्जती ब्यक्तिको प्रतिष्ठा बिरुद्धको कसुर बा अपराध हो । यसले मानसिक रुपमा ब्यक्तिको मान , सम्मान , प्रतिष्ठा , आत्मसम्मान र स्वभिमानमा चोट पुर्‍याउछ । साथै गालि बेईज्जतीले उसको नजिकको नातेदार , साथीभाई , ईष्टमित्र , हकबाला समेतलाई असर पुर्‍याउन सक्छ । यो एक किसिमको मानसिक यातना नै हो । गाली बेईज्जतीले ब्यक्तिको मनलाई घायल बनाउछ । यो प्रत्यक्ष रुपमा ब्यक्तिको मन वा मानसिक स्बास्थ्यलाई असर पुर्‍याउने खालको अपराध हो । गाली बेईज्जतीका कारण ब्यक्तिको मनोबिज्ञानर मानसिक स्बास्थ्यमा नकारात्मक असर परि नैरस्यता , डर , चिन्ता तथा आत्महत्या सम्मका घटनाहरु घटन सक्छन् ।
कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमान जनक शब्द प्रयोग गर्नु गाली हो । अरुको इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने नियतले कुनै तरिकाबाट उसको ब्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाइ होच्याउने र चरित्र हत्या गर्ने उदेश्यले गरिएका सबै कार्य वा आक्षेप बेईज्जति हो ।
गाली बेईज्जतीबाट ब्यक्तिको सम्मान जनक रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन्छ । सामाजिक संजालको प्रयोग गरि कसैको बिरुद्धमा नराम्रो शब्द प्रयोग गरि प्रर्तिक्रीया दिनु , कसैलाई होच्याउने वा बेईज्जत गर्ने उदेश्य ले फोटो तोडमोड गरि पोष्ट गर्नु , ब्यक्तिको ब्यक्तित्ब, लबाई , खबाई आदिलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा टिक्का टिप्पणी गर्नु आदि गालि बेईज्जती पुर्ण व्यवहार हुन ।
यस्तो कसुर गर्ने बा गराउने ब्यक्तिलाई कसुरको गम्भियता, पिडितको प्रतिष्ठामा परेको असर, गालि बेईज्जतीमा प्रयोग भएको माध्यमलाई बिचार गरि पिडितलाई मनासिब क्षतिपूर्तिका साथै कसुरदारलाई एक बर्ष देखि तीन बर्ष सम्म जेल तथा दस हजार देखि बीस हजार सम्म जरिबाना बा दुबै सजायको ब्यबस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा गरिएको छ ।
पिडितले कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना भित्र उजुर गरिसक्नु पर्छ । नत्र उजुरी लाग्दैन ।
बजेटप्रति सत्तारुढदलकै सासद असुन्तुष्ट ‘रुकुमको बजेट झापा हालियोस्’
द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा टुंग्याउन ओली, प्रचण्ड र देउवा बालुवाटारमा छलफल गर्दै